Huwandu hwevanhu vepaInternet Grocery Shopper | Martech Zone
Mugovera, March 19, 2016 Mugovera, March 19, 2016 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura ini ndakaedza Dzvanya, Kroger's online grocery kutenga. Iyo sisitimu yaive isina chaipo, iine toni yezvakanaka pamusoro pekutengesa zvekutengesa. Kutanga, ndakakwanisa kutarisa bhajeti yangu ndichiwedzera chinhu chimwe nechimwe mungoro yangu. Ini ndakakwanisa kuona zvakajeka chinhu chiri chose chiri kutengeswa. Iyo sisitimu yakateedzera zvigadzirwa zvangu zvakajairika zvandakatenga. Uye zvakanditorera maminetsi gumi kutyaira kumusoro, ita timu yeKroger itakure mota yangu, uye uone.
Dai ndaive nechichemo chimwe chaicho chaive chekuti timu yakatsiva mapundu eClaussen eVlasic. Fungidziro yangu ndeyekuti munhu airodha grocery rangu anga akatarisa muchikamu chemunhomba panzvimbo peiyo firiji chikamu chechitoro. Haiwa hunhu!
Ndiwo mutengo mudiki wekubhadhara, zvakadaro! Hazvishamise kuti eGrocery icharova kugamuchirwa kaviri manhamba mu 2016:
40% ye2015 vatengi vekutengesa online vakati grocer yavo yekutanga haina kupa eCom, zvichiratidza kurasikirwa kwekutengesa nemikana yekuvimbika kune avo vekutanga vanotengesa
64% yeavo vakaedza kutenga online online grocery vaizoshandura ma grocers kune ruzivo rwakakura rwe digital
GenX, varume uye avo vane vana ndiwo ari kukurumidza kukura zvikamu zveGrocery gore rino
The 2016 Pamhepo Grocery Shopper infographic inogovera data kubva kumushumo uchangobva kuitwa na Unata. Chirevo chinoburitsa mafambiro eCommerce ye2016 kusanganisira: varume vanofarira eGrocery, GenX ndiyo inokurumidza kukura chikamu cheGrocery uye vatengi vane vana vanokosheswa online. Ini ndiri mutsara wakakwana weiyo demographic!
Tags: clicklisthuwandu hwevanhuecommerceegroceryshopper yegirosagrocery shopper nhambaGrocery kunotengakrogerkroger chinyorwakroger pamusikaonline grocery
Mhoroi, Maita nekugovana yakanaka blog… .Best blog. chinyorwa chinobatsira kwazvo. Yepamhepo yekutengesa bhizinesi muIndia iri kukura nekukurumidza Ini ndinoda chinyorwa chako nekuti ikozvino mazuva munhu wese anotarisa zveazvino matekinoroji uye nyore kuitwa.